Nyowani vhezheni yeWatchOS inowanikwa kurodha v5.0.1 | Ndinobva mac
Nyowani vhezheni yeWatchOS inowanikwa kurodha v5.0.1
Maawa mashoma apfuura Apple yakaparura zviri pamutemo vhezheni itsva yeWatchOS yevashandisi veApple Watch. Mune ino kesi ndeye 5.0.1 version uye mairi kumwe kunatsurudzwa uye kugadzirisa madhigi kunowedzerwa kuhurongwa.
Parizvino, chimwe chezvikonzero chikuru nei ichi chitsva vhezheni yeWOSOS yakatangwa ndechekuti chiitiko chinorira uye zvakanyanya iringi yekurovedza muviri, yanga ichitadza. Zvinotaridza kuti maaccount haana kufamba zvakanaka uye pakupedzisira ino gadziriso yaifanira kuburitswa mazuva mashoma mushure mekumisikidzwa zviri pamutemo kweWOSOS.
Exercise mhete yakaverengwa yakawanda account account
Zvinotaridza kuti chimwe chezvikonzero chikuru chaburitswa iyi vhezheni ndechekuti vamwe vashandisi vanga vaona kuwedzera kwemaminetsi ekurovedza muviri vasina kunyatso kuzviita. Izvi zvakatungamira Apple kuvhura vhezheni itsva iyo yatove inowanikwa kune vese vashandisi Ndiani ane Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 uyezve iyo nyowani Series 4 modhi.
Zvinotaridza kuti mune iyi vhezheni inoshandiswa kugadzirisa zvimwe zvidiki zvikanganiso zveiyo nyowani vhezheni, saka zvinokurudzirwa kana iwe uine imwe yeiyi Apple Watch ndeyekuti iwe unogadziridza nekukurumidza sezvazvinogona. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuwana iyo iPhone Watch application, tinya paGeneral uyezve paSoftware Kugadziridza. Iyi yekuvandudza inotora nguva yakareba yekumisikidza zvinoenderana nevamwe vashandisi, saka usamhanye kana uchiisa pawachi yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani vhezheni yeWatchOS inowanikwa kurodha v5.0.1
MacOS Mojave 1 yeruzhinji beta 10.14.1 ikozvino yavapo
PDF Nyanzvi ikozvino inowirirana neMacOS Mojave